60 astaamo aad u xariifnimo badan oo ku dhiiri galin doona | Abuurista khadka tooska ah
Awoodda a logo Waxay ku saleysan tahay garashada iyo sirdoonka taas oo wakiilka iyo hadalka ugu muuqaalka badan ee shirkadda lagu difaaco. Laakiin mararka qaarkood way adkaan kartaa in la soo koobo nuxurka ganacsiga astaan ​​fudud oo firfircoon. Sababtaas awgeed, waxaa aad muhiim u ah inaan haysano tusaalooyin wanaagsan oo naga caawinaya inay nagu dhiirrigeliyaan inaan horumarinno shaqadeena si cusub oo cusub.
Sababtaas awgeed, si aan u bilaabo toddobaadkan, waxaan jeclaan lahaa inaan dhammaantiin idinla wadaago xulasho 60 astaamo aad u caqli badan oo wax ku ool u ah jimicsigooda wada hadalka iyo bilicsanaanta. Iyaga ku raaxee!
Wareegga majaladda: Qaabku wuxuu noqon karaa labadaba teendho circus iyo joornaal furan.
Aragtida astaanta ayaa naga dhigeysa inaan dooneyno inaan tirtirno oo aan saxno qaladka nafteenna.
Amazon waxay caan ku tahay iibinta wax walba laga soo bilaabo "A ilaa Z". Waxay sidoo kale u adeegtaa sida dhoolla caddaynta, taas oo ah sababta shirkadda loo tixgeliyo saaxiibtinimo iyo soo dhaweyn.
Booska madow ee ku hareeraysan diyaaradda wuxuu ka kooban yahay xarfaha C iyo D.
Maroodiga jirkiisa ayaa sameysmaya booska gudaha ee xarafka E.
Inta udhaxeysa E iyo X waxaa ku taal falaar. Tani waxay ka dhigan tahay saxnaanta iyo xawaaraha adeegga.
Badh macnaheedu waa kala badh Ingiriisiga.
Lugaha iyo gacanta dhexdooda waxaan ka helnaa qaabka qaaradda Australia.
Xarafka aan ku ciyaarayo oo dhintay.
Mosleep waa urur caafimaad oo daryeela dadka qaba cilladaha hurdada. Astaantu waa billowgaagii 'M' oo loogu talagalay inuu u ekaado sariir.
Zip macnaheedu waa jiinyeer waana magaca sumadda.
Xarafka N waa been 2 oo u taagan fikradda mataanaha si aad u wanaagsan.
Xarfaha "L" iyo "i" waxay sameystaan ​​qalin.
Baadhitaanka Khamriga (khamrigii raadiyaha): Waxaan ka helnay iskudhaf u dhexeeya biinanka iyo dhalooyinka khamriga qaarkood.
Xarafka B wuxuu u qaab eg yahay shimbir.
Filinka filimku wuxuu sameysmaa silhouette koob bun ah.
Midawga u dhexeeya labada muraayadood wuxuu abuuraa isla wakhtigaas shaashadda guriga.
Drop micnaheedu waa hoos u dhigista Ingiriisiga.
Farshaxan + Shark. Aagga sare ee burushka waa qaab iyo midab sida fin shark.
Caleen waxay u egtahay guri.
Talaabooyin macnaheedu waa talaabooyin af Ingiriis ah. E wuxuu sameeyaa jaranjaro.
Cinwaanka waxaa lagu sameeyay kaliya silhouette naadiyada golf iyo kubbadaha golf.
Calaamadda aan dhammaadka lahayn waxaa laga sameeyaa laba qalbi.
Ereyga mummy wuxuu ka kooban yahay xarafyo ka kooban mummy silhouette.
Muraayadaha khamriga ee kooxaysan ayaa sameeya sawirka furayaasha biyaano.
Dhaqdhaqaaqa micnaheedu waa dhaqaaq.
Habboonaanta macnaheedu waa ku habboonaanta. "I" wuxuu ujiraa sidii midow udhaxeeya F iyo T.
Dhalanteed: S waxaa laga soo qaatay booska ay uga tagtay xarfaheeda dambe.
Kafee + Octopus.
Xorriyadda macnaheedu waa xorriyad. Xaaladdan oo kale qaybta sare ee xarafka M waxay u muuqataa inay jabtay oo u duulayso sidii shimbir oo kale.
I qabo! Sawirka dhexe wuxuu umuuqdaa iskutallaab udhaxeysa muuqaalka aadanaha iyo gacan qabsaneysa kubad.
Qaabka kafeega iyo koobku isku milmaan oo matalaya fikradda lama huraanka ah ee ganacsiga.
Isku qas sanduuq (sanduuq) iyo kursi (fadhiiso). Astaantu waxay noqon kartaa kursi iyo sanduuq furan labadaba.
Astaantan ayaa ka kooban xiriir saddex-geesood ah. Dhinac waxaa ka muuqda muuqaalka wadnaha. Dhinaca kale, erayga ugu weyn wuxuu ka kooban yahay xarfaha B iyo L oo ka kooban qalbiga. Dhinaca kale, eraygu wuxuu ka kooban yahay jacayl (qaab wadnaha ah) iyo shimbir (qaab-dhismeedka xarfaha B iyo L).
Xarfaha hore magacyadu waa W iyo M. Iyaga ayaa lagu ciyaaray si loo helo shay si fiican u matalaya nuxurka ganacsiga. Xaaladdan oo kale laba biyaano oo ku jira boosaska la rogay.
Miyaad aragtay dariiq ka wanaagsan oo lagu metelo dhibaatada kacsi la'aanta galmada iyada oo loo marayo astaan? Runtii ma ihi.
Fikradda ugu weyn ee ah in kafeega habeenkii uu yahay mid maldahan. Koobka dhexdiisa waxaa ku jira dayax laga abuuray xumbadiisa.
Xarfaha "G" ee ka kooban erayga Beed waxay u egyihiin ukumo.
Khamriga kaynta: Mawqifka iyo naqshadeynta geedaha iyo laamaha astaanta ayaa naga dhigi doonta inaan si fudud u aqoonsanno saddex dhalo oo khamri ah.
Blog Blog Cunto: Cuntada waxaa matalaya jarjaran iyo saxanno. Sawir qaade. Fikradda baloogga sababta oo ah qaabka sanduuqa oo sidoo kale qayb ka ah muraayadaha kaamirada iyo saxanka.
Kingfish (Boqorka kalluunka): Taaj ayaa laga sameeyay qaabab kalluun buluug ah.
Uptown: Guryaha iyo daaraha dhaadheer waa isla waqtigaas fallaaro kor u jeeda, oo markaa ay ku jiraan nuxurka ereyga game
Ereyga kafeega waxaa lagu sameeyaa qaab qiiq ah oo bunkeenu ka tago.
Sawirada Sawirka: Jaantuska shaqsi ayaa ka dhex muuqda muraayadaha kaamerada.
Haddii aad si dhow u fiirsato, waxaad arki doontaa isla waqtigaas, xarfaha p iyo a waa qeyb ka mid ah indhaha baandaha.
Barcode af Ingiriisiga waxaa loola jeedaa barcode. Waxaa lagu ciyaaraa sameynta ereyga si loogu shaqeeyo naqshadda astaanta baarka.
Booska u dhexeeya F iyo aagga cas waa lambarka 1.
Daldalahan ganacsigan dharka ah (Duck is duck in English) wuxuu sameeyaa silhouette duck.
Dhibcaha ku yaal xarfaha waxay u ekaysiinayaan shaashadda dadka da 'kala duwan leh, oo si fudud loola xiriirinayo fikradda qoyska.
Halkan waxaan ka helaynaa labadaba waji leh muraayado iyo shaarib iyo maqas.
Cunnada turkiga ee ku taal bartamaha dhinaca midig waxay u taagan tahay hal ku dhigga shirkadda ee ah inay horay u socoto oo aysan dib u noqon.
Aragtida barta laga bixinayo ayaa leh intaas oo dhan.
Chopsticks qabsashada sushi waxaa si fiican u matalaya xarafka H.
Calaamadda waxaa lagu magacaabaa UP oo macnaheedu yahay 'kor', fallaadhuna waxay samaysaa 'U' waxayna qarinaysaa xarafka 'P'.
Hadaad sifiican ufiiriso C-ga sidoo kale waxaad arki doontaa muuqaalka bisad.
Shinida macnaheedu waa shinni. Markan oo kale bilowgu wuxuu ka kooban yahay raxan shinni ah.
Calaamadda iyo barta ayaa qaab silhouette ah u leh muuqaal dumar ah.
Bisha Cas ee textured waxaa loo isticmaalaa hab taas oo isla markaa ah kubbadda Golf-ka.
La'yahay macnaheedu waa "la waayey". Xaaladdan oo kale aniga ayaa si macno leh u lumay, in kasta oo ay wali sahlan tahay in la akhriyo ereygeenna.
Gacmaha saacadani waxay bixiyaan qaab diyaarad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » 60 logos aad u xariif ah oo ku dhiirrigelin doona
8 Oraahda No Designer Graphic Ha Yidhaahdo